KNOWLEDGE Archives - Page3of 233 - ApannPyay Media
ကိုယ့်ထက် အသက်ကြီးတဲ့ ဦးအရွယ်နဲ့ ချစ်သူဖြစ်ရခြင်း၏ ကောင်းကျိုး(၇)ခု ကြီးရင်မှီ ငယ်ရင်ချီဆိုတဲ့ စကားလေးအတိုင်း ကိုယ့်ထက် အသက်ကြီးတဲ့ သူနဲ့ချစ်သူဖြစ်ရင် ကိုယ်အားကိုးနိုင်တယ်။ ဆိုးချင်သလို ဆိုးနိုင်မယ်။ ချွဲလို့ရတယ်။ တစ်ခါတလေ ကိုယ်က သူ့ကိုဆရာတောင် လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဦးနဲ့ကလေး စုံတွဲတိုင်းတော့ ဒီလိုဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပါ ။ သေချာတာကတော့ ဦးအရွယ်တွေက ကိုယ့်ထက် ဗဟုသုတများမယ်။ မလုပ်သင့်တာကို မလုပ်ဖို့ သူတို့က ဆုံးမနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီတစ်ခေါက်တော့ ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ကိုယ့်ထက် အသက်ကြီးတဲ့ ဦး နဲ့ချစ်သူဖြစ်ရခြင်း ကောင်းကျိုးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက် ပါတယ်နော် (1) သင့်မှာ ကိုယ်ပိုင် ပုံပြင်ပြောဆရာ ပိုင်ဆိုင်သွားပါပြီ ပုံပြင်ပြောဆရာလို့ ဘာလို့ပြောရ တာလဲဆိုတော့ သူက သင့်ကို သူ့ဘဝမှာ ကြုံခဲ့တဲ့ အရာတွေကို … Read more
ခေါင်းအုံးလေးသာသိတဲ့ ကိုရင်လေးရဲ့ လိုအပ်မှုမျက်ရည်
January 26, 2021 January 26, 2021 by ApannPyay Media
ခေါင်းအုံးလေးသာသိတဲ့ ကိုရင်လေးရဲ့ လိုအပ်မှုမျက်ရည် မိသားစုဓါတ်ပုံလေးကိုကိုင်ပြီး ငိုနေတဲ့ ကိုရင်လေးရဲ့အဖြစ် လွမ်းတယ် အမေ နဖူးလေးစမ်းပြီးအပူတိုင်းတတ်တဲ့ အမေ့ ရဲ့လက်တစ်စုံကို လွမ်းတယ် ဘာစားချင်လည်းလို့ခဏခဏ မေးတဲ့ အမေ့ ရဲ့စကားသံလေးလေးကို လွမ်းတယ် လေစိမ်းတွေ ထွက်မခံပါနဲ့ဆိုတဲ့ အမေ့ ရဲ့သတိပေးသံလေးကိုလည်း လွမ်းတယ် ပူပူနွေးနွေးနဲ့အမေ့ လက်ရာဆန်ပြုတ်တစ်ခွက်ကိုလည်း လွမ်းတယ် ငယ်ဘဝ ငယ်ညတွေက အမေ နဲ့ပတ်သက်သမျှ အရာအားလုံးကိုလွမ်းတယ် အမေ အခုတော့ အမေ —— ဝေးတစ်မြေ နယ်တစ်ခြားက စာသင်သားတစ်ယောက်ဘဝရဲ့ အဖြစ်ကို အမေ သိလေမလား အမေ့ အမြင်မှာ မသိသာပေမယ့် သား ရင်မှာ အထိနာခဲ့ရသူပါ အမေ မိုးထိလို့အဖျားမိနေပေမယ့် မရပ်နားနိုင် ဆွမ်းထွက်ရပြန်တယ် အမေ သဒ္ဓါဆွမ်းမရပ်ရင် တစ်ထွာဝမ်းငတ်တဲ့အဖြစ် အမေ သိလေမလား … Read more
ဖုန်းအားသွင်းတာနဲ့ပတ်သက်လို့ လူတိုင်းလုပ်တတ်ကြတဲ့ အမှားအယွင်းများ
ဖုန်းအားသွင်းတာနဲ့ပတ်သက်လို့ လူတိုင်းလုပ်တတ်ကြတဲ့ အမှားအယွင်းများ စာဖတ်သူတွေထဲမှာ နေ့စဉ်ဖုန်းမသုံးတဲ့သူမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ နေ့တိုင်းဖုန်းသုံးကြတဲ့အခါ တစ်နေ့ကိုတစ်ကြိမ်မက ဖုန်းအားသွင်းတတ်ကြပါတယ်။ ဖုန်းအားသွင်းတာနဲ့ပတ်သက်လို့ လူတိုင်းလိုလိုလုပ်တတ်ကြတဲ့ အမှားအယွင်းလေးတွေကို သတိထားဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ ဖုန်းအားသွင်းကြိုးကို ပလပ်ပေါက်မှာ အမြဲတပ်ထားခြင်းက အခန်းတွင်းစိုထိုင်းဆနဲ့ဓာတ်ပြုပြီး မီးလောင်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်လို့ ဖုန်းအားသွင်းပြီးတိုင်း အားသွင်းကြိုးကိုဖြုတ်ထားပါ။ ဖုန်းအားကို ၁၀၀ ပြည့်တဲ့အထိသွင်းထားတာက အားကုန်ဖို့ပိုလွယ်စေတာကြောင့် ဖုန်းအားသွင်းတဲ့အခါ ၉၈ လောက်ဖြစ်ရင် ဖြုတ်ထားလိုက်ပါ။ ဖုန်းအားကုန်ပြီးပိတ်သွားတဲ့အထိသုံးခြင်း၊ ဖုန်းအား ၁၀ အောက်ရောက်မှအားသွင်းခြင်းက ဖုန်းဘက္ထရီကိုလွယ်လွယ်ပျက်စေပါတယ်။ ဖုန်းအား ၂၀အောက်ရောက်တာနဲ့ အားပြန်သွင်းတာက ဖုန်းဘက္ထရီသက်တမ်းကို ပိုကြာရှည်စေပါတယ်။ ဖုန်းကိုတစ်ညလုံးအားသွင်းထားတာက ဖုန်းဘက္ထရီမြန်မြန်ပျက်အောင် လုပ်နေသလိုပါပဲ။ ဖုန်းအားသွင်းထားတုန်း ဖုန်းသုံးတာက ဘက္ထရီပေါက်ကွဲခြင်းကိုတောင် ဖြစ်စေနိုင်လို့ လုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဖုန်းအား ၂၀ အထက်ရှိနေတဲ့အခါ ဖုန်းအားသွင်းတာကလည်း ဖုန်းကိုမြန်မြန်ပျက်စေနိုင်ပါတယ်။ ၂၀ အောက်ရောက်မှ ဖုန်းအားသွင်းတာက အသင့်တော်ဆုံးပါ။ … Read more
ခြေမထက် ခြေညှိုး ရှည်တဲ့ သူတွေကို ဘာ့ကြောင့် လက်မလွှတ်သင့်တာလဲ ?
ခြေမထက် ခြေညှိုး ရှည်တဲ့ သူတွေကို ဘာ့ကြောင့် လက်မလွှတ်သင့်တာလဲ ? ခြေညှိုးဟာ ခြေမထက်ရှည်တဲ့သူတွေတော်တော်များများရှိပါလိမ့်မယ်။ အဲလိုလူတွေရဲ့ ဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်သဘောထားတွေကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သူတို့မှာ ကောင်းတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ယောကျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့လိုလူတွေကိုတွေ့ရင်တော့ လက်မလွတ်လိုက်ပါနဲ့။ သူတို့ဟာ ချစ်ပြီဆိုလဲ သူများနဲ့မတူသလို မုန်းပြီဆိုလဲ လှည့်ကြည့်တတ်သူတွေမဟုတ်ပါဘူး ခြေညှိုးက ခြေမထက်ရှည်နေတဲ့ သူဟာ ၁။ အချစ်ကြီးတယ် အစွဲအလမ်းကြီး ခံစားလွယ်တယ်။ ၂။ အငြိုးကြီးတယ် ရန်ငြိုးထားတတ်တယ်။ ၃။ ချစ်သူကိုဦးစားပေးတယ် ချစ်သူကိုလည်း အနိူင်ယူတယ်။ ၄။ ချစ်ပြီဆို ဘယ်လိုတားတား ဇွတ်ချစ်တယ် မုန်းပြီးဆို လုံးဝလှည့်မကြည့်ဘူး။ ၅။ စကားပြောတည်တယ် ခင်သွားရင် ပေါတောတောလုပ်တတ်တယ်။ ၆။ အိမ်မှာ ဘုရင် အပေါင်းအသင်းကြား သူမပါမပြီး။ ၇။ သူများအားမကိုးတတ်ဘူး အကူအညီယူပြီးရင်လည်း ကျေးဇူးဆပ်ဖို့မမေ့တတ်ဘူး။ ၈။ … Read more
ဆယ်တန်းေကျာင်းသူေလးတဦးရဲ့ ရင်နင့်ဖွယ် ပရလောကဖြစ်ရပ်
ဆယ်တန်းေကျာင်းသူေလးတဦးရဲ့ ရင်နင့်ဖွယ် ပရလောကဖြစ်ရပ် ညောင်ပင် တန်းရွာမှ ကျောင်းဆရာကိုတင်လှနှင့် မထားမေတို့မှာ ရွှေစင်ဆိုတဲ့ သမီးချောလေးရှိတယ် တစ်ဦးတည်းသောသမီးလေးပေါ့။ ရွှေစင်ဆိုတဲ့အတိုင်း တောသူပေမယ့် အသားဝင်းဝါ ပြီး ရွှေစင်ရုပ်လေးသမျှ လှပချောမောလေရဲ့ ရွှေစင်လေးဟာ ရုပ်ချောရုံသာမက စာပေကလည်းတော်တယ် ကြိုးလည်းကြိုးစားရှာတယ် ခုဆိုရွှေစင်လေးဟာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြစ်တဲ့ ဆယ်တန်းကျောင်းသူကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီ။ ကျောင်းဆရာ ကိုတင်လှတို့ ရွာဟာ ဟိုးယခင်ကမူလတန်းထိပဲရှိတယ် နောက်ပိုင်း ကျောင်းနေကလေးများလာတာရယ် ကလေးတွေရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှု့ကြောင့် အလယ်တန်းကျောင်းဖြစ်လာခဲ့တယ် ခုဆို အ.ထ.က ခွဲ ကျောင်းဖြစ်ခဲ့တာ သုံးနှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီ နဝမတန်းနဲ့ ဒသမတန်းကိုမူ ရွာရှိ ဆရာ /မ များက အပြင်ကျူရှင်လေး ဖွင့်ပေးထားလေတယ် မြို့မှာလို guit တွေ ဝိုင်းတွေရှိဘူးလေ နဝမတန်းကိုတော့ ဆရာမ ဒေါ်ဖြူဖြူသက်အိမ်မှာ ဖွင့်ပြီး ဒသမတန်းကိုမူ ဆရာကိုတင်လှ အိမ်မှာဖွင့်ထားတယ် … Read more
လတ်တလောဖြေရှင်းနိုင်သော ကျန််းမာရေးဆိုင်ရာလျှို့ဝှက်ချက်လေးများ ဖတ်ကြည့်လိိုက်ပါ သင်မသိသေးတာတွေ တအံ့တဩ သိစေရမယ် ၁ ) – သင့်လည်ချောင်းထဲမှာ ယားနေတယ်ဆိုရင် …. နားရွက် ကို ကုတ်လိုက်ပါ နားရွက်မှာ. ရှိတဲ့ အာရုံကြောတွေ ကို လူံဆော်မိတဲ့ အခါအဲဒီ အာရုံကြောတွေဟာ လည်ချောင်းထဲက အာရုံကြောတွေကို အလိုအလျှောက်တုန့်ပြန်စေပြီး ယားယံမူ ကို ပျောက်ကင်းလိမ့်မယ်။ ၂ ) – လူတွေ ဆူညံ့နေတဲ့ နေရာ ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းပြောတဲ့နေရာ တယောက်ယောက်ရဲ့အသံကို မကြားနိုင် ဖြစ်နေလား.. ရုတ်ချည်း ပြောလိုက်တဲ့ အသံကို ကြားဖို့ ဆိုရင်တော့ ညာဖက်နား ကို အသုံးပြုပါ ဂီတ သံစဉ်တွေ ကြားဖို့ ဆိုရင်တော့ ဘယ်ဘက်နား ကို အသုံးပြုပါ။ ၃ … Read more
သင့်အိမ်ကို ကံကောင်းခြင်းတွေ ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်တဲ့ အဆောင်ေယာင် အပြင်အဆင်များ
သင့်အိမ်ကို ကံကောင်းခြင်းတွေ ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်တဲ့ အဆောင်ေယာင် အပြင်အဆင်များ ရွှေခေ တ်ပရိသတ်တွေ အတွက်အခုတစ်ခေါက်ဖော်ပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ မိမိတို့ရဲ့ နေအိမ်တွေမှာ ရိုးရှင်းလွယ်ကူလှတဲ့ နည်းလမ်း၊ အဆောင်ယောင် လေးတွေနဲ့ ကံကြမ္မာကောင်းတွေ ရရှိအောင် ပြုလုပ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုမှာချင်တာက ဒါဟာ ဘာသာရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့အယူ မျိုးတွေမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံတကာက ယုံကြည်မှု ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို တော့ကြိုတင်ပြီး အသိပေးပါရစေနော် ။ ၁။ အိမ်တံခါးအရောင် ကံကောင်းစေတဲ့ အိမ်လေးတစ်လုံးဖြစ်ဖို့အတွက် ပထမဆုံးအနေနဲ့ ပြင်ဆင်သင့်တာကတော့ အိမ်ရဲ့တံခါးမကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကျော် တရုတ်ဗေဒင်ဆရာကြီး ဖုန်းရွှဲ့ (Feng Shui) ရဲ့ အဆိုအရတော့ အိမ်တံခါးရဲ့ အရောင်ကို အိမ်မျက်နှာမူတဲ့ဘက်ပေါ်မူတည်ပြီး အရောင်ချယ်သခြင်းက သင့်အိမ်ကို ကံကောင်းခြင်းတွေဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်ပါသတဲ့။ အကယ်၍သင့်အိမ်က တောင်အရပ်ကိုမျက်နှာမူထားတယ် ဆိုရင် တံခါးကို အနီရောင် (သို့) … Read more